दिनेश बल तामाङ्गको हल्लकै मैच्याङ पछि फेरि" मनलाई के भो यस्तो " गीत सर्बजनिक भएको छ
https://youtu.be/cluhxZjDFqc अाजको यस हाम्रो खबर अनलाइनले छापेको छ २०१८/०७/२० तारिखमा नवा गायक तथा संगीतकार दिनेश बल तामाङ्गको "मनलाई के भो यस्तो " गीत (https:/www.youtube.com) मा सर्बजनिक भएको छ । उहाँको जन्म स्थान ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँ पालिक ढुङ्गे सुन्दर पानी नल्लु-३मा रहेको बताउनुभयो ।
उहा नवा गायकका साथै संगीतकार पनि हुनुहुन्छ उहाले अहिलेसम्म २ वटा अाफ्नै गीतमा संगीत पनि गरि सक्नु भएको छ । उहाले भन्नू हुन्छ यस संगीत क्षेत्रमा लाग्नु मेरो सौ भाग्य त हो र अाज सम्म जे जस्तो कठिनाइ परे पनि मेरो परिवारको सबै सदस्यले मेरो लागि ठुलो साथ निभाउनु भएको छ। अाज म यो स्थानमा छु उहाहरुकै साथले नै छु ।
यस क्षेत्रमा लाग्ने मेरो सानैदेखिको इच्छा थियो र यसलाई अझै राम्रो गर्दै जाने छु म एकदिन सबैजनाको मन जितेरै छाड्नेछु । हजुर साच्चै नै उहाँको कुरा सुन्दा मलाई पनि केहि गरौँ झै लाग्यो र उहाँले यस्तो थुप्रै भनाइहरू राख्नु भयो अाखिर मारेर के नै लाने होर होइन भन्नू हुन्छ हाम्रो यस खबर अनलाइनमा र हामीले उहालाई प्रश्न राखेको थियौ ।
(१) मनलाई के भोमा भिडियो बनाउनु भएननि किन ? #समयको कारण नभ्याएरर । (२) अनि अर्को गीत ल्याउनु हुन्छकि यसमै यथावत रहनुहुन्छ? # नै हामी कलाकारले कुनैकुनै नयाँ कुराहरूको खोजिमा हुन्छ सबै जनाको साथ र माया हो म निरन्तर नै रैरहने छु । (३) अर्को गीतको तयारी कस्तो चल्दै छ हजुरको ? #अब मेरो फेरि नयाँ गीतको तयारी चल्दै छ ।
यहालाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको अमुल्य समयको लागि अन्तमा केही भन्नु हुन्छ ? मेरो हालसालै सर्बजनिक भएको गीतबाट सबैजना देश देशमा जहाबाट सुन्नु भए पनि मलाई केही प्रतिक्रिया दिनुहोस् अझै यो भन्दा नयाँ कुराहरू ल्याउन सजिलो हुने थियो भन्न चाहन्छु । र अन्तमा खबर अनलाइन र सबै मित्रहरूलाई मेरो धेरै धन्यवाद बिशेश खबर अनलाइन मिडियालाई बिशेश धन्यवाद मेरो लागि समय मिलाउनु भएकोमा । Video herna tala thichnus 👇 https://youtu.be/1z24a35Wlgc